Gudoomiyaha Maxkamada Sare oo Ugu Baaqey Wadaadada iyo Dhamaan Dadka Wanaagsan Iney Dawlada ka Shaqeeyaan,Oo Aan Dadka Xun Looga Tagin.. |
Gudoomiyaha Maxkamada Sare oo Ugu Baaqey Wadaadada iyo Dhamaan Dadka Wanaagsan Iney Dawlada ka Shaqeeyaan,Oo Aan Dadka Xun Looga Tagin..
“Hadii intii wanaagsanayand ay go’doomaan oo ay dawladii iyo meelihii kaleba galiwaayaan …. waxa isugu ururaysa inta aan wanaaga wadin” Prof Aadan Xaaji Cali
Guddoomiyaha maxkamada sare Aadan Xaaji Cali, ayaa culimada iyo dadka wanaagsan ee reer Somaliland ugu baaqay inay soo galaan nidaamka dalka oo ay shaqeeyaan xafiisyada iyo ciidamada dalkaba.
Guddoomiyaha maxkamada sare Aadan Xaaji Cali waxa uu sida oo kale sheegay in loo baahan yahay culimada iyo dadka wanaagsani inay go’doonka ka soo baxaan oo goobaha shaqada ay dhaqanka wanaagsan ku faafiyaan, waxaanu sidan ka sheegay mar uu ka qaybgalay tartan quraan oo Hargeysa lagu soo gabogabeeyay.
“Waxa looga baahan yahay jiilasha wanaagsan ee quraanka bartay inay nolasha caamka ah iyo ta dawladaba ka qaybqaataan, waayo hadii intii wanaagsanayand ay go’doomaan oo ay dawladii iyo meelihii kaleba galiwaayaan oo ay xafiisyada tagi waayaan oo ay ka shaqayn waayaan, waxa isugu ururaysa inta aan wanaaga wadin.” Ayuu yidhi Aadan Xaaji Cal.
Guddoomiyaha maxkamada sare ee Somaliland Md Aadan Xaaji cali waxa uu culimada iyo dadka wanwanaagsan ee masaajida ugu baaqay inay ka qayb qaataan siyaasada dalka .
“Anigu halkan waxaan marinayaa in aan dadka wanaagsani misaajidada mooyaane waa inay meelaha nolashu ka socotana ka qaybgalaan. jiilasha yar yari waa inay danta caamka ah ka qaybgalaan. imika Somaliland oo kale imtaas oo imtaxaan ayaa la galaa waa in laga qaybgalaa waayo diinteenu intay ku faaftay akhlaaq ayaa ka badnayd intay ku faaftay dacwad waa in meelaha caamka ah laga qaybqaato oo laga shaqeeyo oo saraakiil boolis la noqdo, xafiisyada dawlada laga shaqeeyo, hadii kale qofku waa uu goddoomayaa”ayuu yidhi Guddoomiyaha Maxkamada sare ee Somaliland.